Indawo entle echibini
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguSeeblick
Amagumbi ethu ama-3 kumgangatho ophantsi abekwe ngokuzolileyo, amelene ngqo ne-Dreiländersee kwaye anika indawo ukuya kuthi ga kwi-4 yabantu. Kwinani elipheleleyo le-75 square metres, banikezela ngezona meko zilungileyo kwiholide yokuphumla. Ifulethi ngalinye liyilwe ngokwalo. Ixhotyiswe ngamagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yokutyela kunye nekona yesofa, kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Isidlo sakusasa okanye isiqingatha sebhodi sinokubhukishwa ngokwahlukeneyo kwindawo yethu yokutyela yaseSeeblick.
Izindlu ezi-3 zezeApartment Hotel yokutyela iSeeblick, ekumbindi wendawo yokuzonwabisa yaseDreiländersee. Ukwahlulwe kwizindlu ezi-4 zophahla kuphela, amagumbi ahlala kufuphi nendawo yokutyela kunye nechibi, apho kukho ukufikelela ngokuthe ngqo.
I-Appartement-Hotele yokutyela iSeeblick lishishini eliqhutywa lusapho elizinze apho ngaphezulu kweminyaka engama-26. Siyavuya ukunika isidlo sakusasa okanye isiqingatha sebhodi ngokubhukisha kwakho, nceda uqhagamshelane nathi.
Ifakwe ngokuthe ngqo kwiDreiländersee kwaye embindini wendawo yokuzonwabisa yasekhaya enegama elifanayo, yonke into inokwenzeka ukusuka kwibhayisekile, ukukhwela intaba ukuya ekuphumleni elunxwemeni.
Ukongeza, ukusondela kweHolland ngemizuzu emi-5 ngemoto kunika amathuba angakumbi okuhlola indawo
Umbuki zindwendwe ngu- Seeblick
Kuhlala kukho umntu okhoyo ngexesha lokuvulwa kwendawo yokutyela ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna uncedo.
Indawo yokutyela ivulwa ngentsimbi ye-11 kusasa ukuya kweye-10 ebusuku, kodwa isidlo sakusasa siqala ngentsimbi yesi-9 kusasa. Indawo yokutyela ivalwa ngoMvulo.
Indawo yokutyela ivulwa ngentsimbi ye-11 kusasa ukuya kwey…